» पहिलो पल्ट शिशिर भण्डारीको श्रीमती मिडियामा ! शिशिरले ल्याए श्रीमती सहितको यति रमाइलो भिडियो. हेर्नुहोस पहिलो पल्ट शिशिर भण्डारीको श्रीमती मिडियामा ! शिशिरले ल्याए श्रीमती सहितको यति रमाइलो भिडियो. हेर्नुहोस – हाम्रो खबर
पहिलो पल्ट शिशिर भण्डारीको श्रीमती मिडियामा ! शिशिरले ल्याए श्रीमती सहितको यति रमाइलो भिडियो. हेर्नुहोस
सँचारकर्मी तथा कलाकार शिशिर भण्डारीले आफ्नो श्रीमती सहितको पहिलो भिडियो युटुबमा ल्याएका छन् । पोखरा भ्रमणको क्रममा खिचिएको भिडियोलाई धेरैले रुचाएका छन् ।
रचना रिमाल सहितको पारिवारिक भिडियोमा शिशिरले प्याराग्लाईडिंग गरेको फुटेज पनि राखिएको छ । शिशिर र उनको श्रीमती र रचना रिमालले मिलेर गीत गाएका छन् ।
प्याराग्लाईडिंग गर्ने क्रममा शिशिर डराएका थिए । साँगीतिक कार्य र सामाजिक काममा व्यस् भएका शिशिर पछिल्लो पाँच दिन पाृखराका मनोरम दृश्यहरुमा रम्न गएका थिए । रचना रिमालसँगै उनकी श्रीमती पनि त्यस घुमफिरमा थिए ।
रचना रिमाल सहितको पारिवारिक भिडियोमा शिशिरले प्याराग्लाईडिंग गरेको फुटेज पनि राखिएको छ । शिशिर र उनको श्रीमती र रचना रिमालले मिलेर गीत गाएका छन् । एपि न्युज बाट
शिशिर र उनको श्रीमतीको यो रमाईलो भिडियो हेर्नुस